Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း » မိခင်ကျန်းမာရေး » Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း)
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) ကဘာလဲ။
Cholestasis လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နောက်ပိုင်းလတွေမှာဖြစ်တတ်ပြီး လက်တွေ၊ ခြေထောက်တွေနဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ အလွန်အမင်းယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။
နေရထိုင်ရခက်စေပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်အတွက် သိသာတဲ့ဘေးဖြစ်စေခြင်းမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ရင်သွေးငယ်လေးကိုတော့ ထိခိုက်ကောင်းထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် များသောအားဖြင့် ဆရာဝန်တွေက စောစောမွေးခိုင်းတတ်တယ်။
Cholestasis ဆိုတာ အသည်းကနေထုတ်ပေးတဲ့ အစာခြေရာမှာသုံးသော အရည်တစ်မျိုးစီးဆင်းမှု ယိုယွင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းက အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနာမည်တွေကတော့ obstetric cholestasis ၊ intrahepatic cholestasis လို့ခေါ်တတ်ကြတယ်။
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Cincinnati ကလေးဆေးရုံကဆေးကုသမှုစင်တာအရတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၁၀၀၀ မှာ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီး ဆွီဒင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ချီလီနိုင်ငံသားတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ယားယံခြင်း၊ အထူးသဖြင့် လက်၊ ခြေထောက်
သည်းခြေကျောက်မရှိဘဲ ဝမ်းဗိုက်ညာဘက် အပေါ်ပိုင်းတွင် နာကျင်ခြင်း
တခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိနေနိုင်တာကြောင့် စိတ်ပူသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြောင်းအရင်းကတော့မသေချာပါဘူး။ မျိုးရိုးနဲ့ ဗီဇကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ထွက်တဲ့ ဟောမုန်းတွေက အသည်းကနေထုတ်တဲ့ အစာခြေရည်စီးဆင်းမှုကို ထိခိုက်စေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုအရည်တွေအသည်းမှာပုံလာတဲ့အခါမှာ သွေးတွင်းကိုစီးသွားပြီး တစ်သျူးတွေမှာစုပုံကာ ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခြင်း၊ သွေးစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ bile acid ပမာဏ၊ bilirubin ပမာဏတို့ကို စစ်ဆေးပြီး ရောဂါသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
မိခင်နဲ့ကလေးဆေးကုသမှုအဖွဲ့အစည်းက TBA ဆိုတဲ့ bile acid စုစုပေါင်း သို့ သွေးတွင်း bile acid ၁၀ micromol/L နဲ့အထက်ရှိမယ်ဆိုရင် intrahepatic cholestasis လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
Cholestasis of pregnancy (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကြုံရတတ်တဲ့ယားယံခြင်းအကြောင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုရဲ့ဦးတည်ချက်ကတော့ ယားယံခြင်းကို သက်သာစေဖို့ဖြစ်တယ်။ ဆေးတစ်ခုခုမသောက်ခင်မှာတော့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့ အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ယားယံခြင်းအတွက်လိမ်းဆေး သို့ corticosteroid များ
Bile acid နည်းစေသည့် ursodeoxycholic acid ကဲ့သို့ဆေးများ
ရေအေးအေးနှင့်ရေချိုးခြင်း – သွေးလည်ပတ်မှုကိုနှေးစေပါတယ်။
Dexamethasone – ကလေးအဆုတ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုအားပေးသည့် steroid တစ်မျိုး
Vitamin-K ဓါတ်ဖြည့်ဆေးများ – ကလေးမီးမဖွားခင် နဲ့ မီးဖွားပြီးစမှာ ဦးခေါင်းတွင်းသွေးယိုခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့သုံးပါတယ်။
Dandelion ခေါ် ဒုဓလီအမြစ်နှင့် milk thistle ပင်တွေဟာ အသည်းကောင်းစေတဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။ (မမှီဝဲခင်မှာတော့ ကျန်းမာရေးတတ်ကျွမ်းသူနဲ့ အရင်တိုင်ပင်ပါ)
သွေးတွင်း bile acid နဲ့ အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ပုံမှန်သွေးစစ်ခြင်း
သင့်ကိုယ်ဝန်အခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ရောဂါရာဇဝင်။
Cholestyramine လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အယူအဆအမျိုးမျိုးကွဲလွဲပါတယ်။ အရင်တုန်းက ထိုဆေးကို cholestasis အတွက်သုံးခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ တခြားကုသမှုတွေလောက် အာနိသင်မရှိခြင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိခြင်း( Cholestasis ရှိသော ကိုယ်ဝန်သည်များတွင် နည်းနေသော ဗီတာမင်-ကေ ပိုနည်းစေခြင်းကဲ့သို့) တွေရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတချို့က ပြထားပါတယ်။
တချို့သောယားယံသည့်နေရာများကို ရေခဲကပ်ခြင်းကလည်း ယားယံခြင်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Cholestasis of pregnancy. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cholestasis-of-pregnancy/basics/definition/con-20032985. Accessed August 3, 2017.
Cholestasis Of Pregnancy. http://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/cholestasis-of-pregnancy/. Accessed August 3, 2017.
Cluster Headache (အုံဖွဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်း)